Amfụfụ amfụfụ Mat, Fanye Poknee Pads, Fripe Paynee Pays - Baoerxi
Shijiazhuang Baoerxi Plastic Products Co., Ltd bụ ọkachamara nke rụpụtara ngwaahịa ụfụfụ kemgbe 1998.
Anyị nwere teknụzụ dị elu na akụrụngwa nhazi, ngwaahịa anyị gụnyere PE, EVA, EPDM, NBR / PVC na ụdị matri egwuregwu agba agba dị iche iche. Anyị nwere ihe karịrị ụdị akwa ikpere 40, Nke a ma ama na Europe, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, North America na Middle East wdg. A na-eji ha arụ ọrụ na-arụzi ụgbọala, ewu ụlọ, ịgbado ọkụ elektrọn, egwuregwu, ubi na ngwa ọrụ ndị ọzọ.
Klọ ụlọ EVA Mat Gardening Mat Kneeler bụ ...
Baoerxi Plastic Ngwaahịa
Nkwupụta gbasara mgbasa ozi
Ugbo nke ohia na - adi otutu na egwu ala na ikwuputa ahiri na ime ka ndi mmadu ghara idi ngbochu ha. Ọ na-akachasị mma ...
Ugbo nke ohia na - adi otutu na egwu ala na ikwuputa ahiri na ime ka ndi mmadu ghara idi ngbochu ha. Ọ na-akachasị mma ịnọ nso maka omume gị, nke pụtara na n'ọtụtụ oge, a ga-achọ ka ị na-eduzi ...
nchebe okpu ikpere
Ihe ngwa ngwa mkpuchi siri ike na-apụta dị ka akwa a na-arapara n'ikpere gị. A na-enye akwa site na ụfụfụ nchekwa dị ukwuu nke na-enye nchebe dị mma nke ikpere, na oghere ndị a na-egbu egbu karịa ikpere na-enye mgbanwe dị mma, ebe na-enye ohere vidiyo dị mkpa ...
Kachasị mma ikpere na pọọsụ 2018
Pads na akwa ndị kachasị mma na-egbochi ikpere gị na-echebe gị pụọ na mmiri oyi, unyi na-adịghị mma mgbe ị na-eme DIY. Can nwere ike ichekwa ego site na iji aka gị na-arụ ọrụ na ụgbọ ala gị, mana ọ nwere ike ịbụ mes…